चिकित्सा शिक्षा आयोगको उपाध्यक्ष छनोट प्रकृया तत्काल रोक्न डा. गोविन्द केसीको माग, नसच्याए कडा आन्दोलन « Swadesh Nepal
काठमाडौँ– डा. गोविन्द केसीले चिकित्सा शिक्षा आयोगको उपाध्यक्ष पदका लागि जारी छनोट प्रकृया त्रुटिपूर्ण भएको तत्काल रोक्न माग गरेका छन् । केसीले प्रकृया रोकेर नसच्चाए कडा आन्दोलन गर्ने चेतावनी समेत दिएका छन् । उनले सो पदका लागि आवेदन दिएकाहरु सबै अयोग्य भएको भन्दै नाम फिर्ता लिनुपर्ने पनि बताएका छन्